Orlistat & Tadalafil poda inogadzira fekitori-CMOAPI
Zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinofanirwa kuve zvakasimba
Fekita yedu ndeye GMP, cGMP
ISO: 9001: 2008 yakarongedzwa.
Isu tinopa CMO & API imwe-yekumira ser-
zvakaipa: R & D, kugadzirwa, kugadzirwa
ing uye kutengesa.
CMO uye API imwe kumira basa
CMOAPI inogona kupa masevhisi anotevera, ese anotsigirwa nemitemo yedu yakasimba mukudzivirirwa Kwepfungwa (IP), kuve nechokwadi kuti mapurojekiti anoitwa mukutenda kwakasimba nguva dzose.
CMOAPI yeDhishuwa Discovery is Cloud-based, cuffitive solution inoongorora ruzivo rwesainzi uye data kuratidza zvakabatana uye zvakavanzika zvinobatana izvo zvinogona kubatsira kuwedzera mikana yekubudirira kwesainzi.
Kwemakore gumi apfuura, CMOAPI yanga ichipa yakasarudzika tsika yekudyidzana uye mabasa ekugadzira. Yedu yekushumirwa ngazi inogona kubva kumamigigamu kadiki diki kusvika pamatani ezvikuru zvekugadzira mabasa.
CMOAPI inowanikwa mishonga yekutengesa tsika synthesis uye chibvumirano R&D.
JINAN CMOAPI BIOTECHNOLOGY CO., LIMITED. yakavambwa muna2007, ikambani yehunyanzvi yekambani inobatanidzwa mukutsvaga, kuvandudza uye kushambadzira kwemishonga mbishi zvigadzirwa. Zvigadzirwa zvekambani zvekambani: Lorcaserin, vapindiri veLorcaserin, orlistat, Sesamol, tadalafil uye vepakati vetadalafil, nezvimwe. Fekitori yedu ine yakazara yekuona zvishandiso, 60 seti yeHPLC, makumi maviri seti emagetsi echromatographs, LCMS, ELSD, ultraviolet uye inoonekwa masekirometa, kupisa zvinomesa uye zvimwe zviridzwa zvemberi. Yakapfuura ISO20, ISO14001 uye DMF certification kuburikidza nekubatanidzwa uye kuwanikwa, uye ine huwandu hwese hwehutongi hwehurongwa.
Kambani yedu inoshandisa nyanzvi dzinoverengeka dzine ruzivo rwekunze rwekunze, uye ine masimba akasimba ezvidzidzo zverabhoritari, kuyedza kwekutyaira uye kugadzirwa kwemaindasitiri Kune varapi gumi nerimwe uye vanopfuura makumi mana makumi matanhatu, masayendisiti, uye mainjiniya kukambani yedu. Iyo API yekugadzira chigadziko inovhara nzvimbo inopfuura makumi mana mu.GMP yemiti yemiti inovhara nzvimbo inopfuura 11mu uye ine musangano wemazuva ano, laboratori yehutongi uye zvivakwa zvekuona. , dzimba dzekugara, dzimba dzekudyira, nezvimwe.
"CMOAPI ISO 9001: 2008 yakanyoreswa uye zviitiko zvese zvebhizinesi zviri kunyatsoenderana nemabatiro ehunhu epasi rese."